जिरो ग्राउन्डबाट उठेको बुद्धि पूर्जाको जीवन : ह्याण्डीक्राफ्टले बदल्यो जिन्दगीको परिभाषा:: Artha Dabali
जिरो ग्राउन्डबाट उठेको बुद्धि पूर्जाको जीवन : ह्याण्डीक्राफ्टले बदल्यो जिन्दगीको परिभाषा
अल्लोबाट कपडा मात्र नभएर दैनिक जीवनका आवश्यक विभिन्न ह्याडिक्राफ्ट सामान उत्पादन हुन्छन् । ऐतिहासिक हिसावले हेर्दा परापूर्व कालमा हाम्रा पूर्खाले यसकै रेसा÷धागोबाट आफूलाई आवश्यक कपडा उत्पादन गर्दथे ।
प्राकृतिक उत्पादन पछिल्लो फेसन क्षेत्रमा आकर्षणको विषय बनेको छ । विदेशीहरु यस्ता अल्लो सिस्नु, केराबाट उत्पादित हेण्डमेड सामानहरु खोजी खोजी लैजान्छन् । तर, हाम्रो देशमा यो खेर गइरहेको अवस्था छ ।
विदेशीहरुको आकर्षण बढेको भए पनि नेपालीहरु आफ्नै देशमा उत्पादन हुने यस्ता सामानहरुलाई महत्व दिदैनन् । आज अल्लोकै खेतीबाट पनि लाखौं रुपैयाँ कपाउन सकिन्छ । मलाई लाग्छ कोही विदेशिनु पर्ने आवश्यकता छैन ।
म पछिल्लो समय सरकारी तथा गैर – सरकारी निकायहरुसँग अल्लोको विकास र विस्तारका लागि के गर्न सकिन्छ ? अध्ययन अनुसन्धानमा छु । किनभने नेपाली दाजुभाइहरु सामान्य आर्थिक उपार्जनकै लागि विदेशिन नपरोस भन्ने मेरो उद्देश्य हो ।
अल्लो खेती तथा यसको उत्पादनकै कारण म जुन स्थानमा पुगेँ त्यो जीन्दगीकै धेरै ठूलो संघर्षबाट प्राप्त भएको हो । मलाई गर्व महसुस छ । अल्लोबाट कपडा, झोला, जुत्तालगायतका सामाग्री बनाउन सकिन्छ । स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक र नेचुरल भएकै कारण पर्यटकको रोजाइमा परेको हो ।
सम्भावना र बजार निकै राम्रो छ । अल्लो, जसले मलाई उद्यमी मात्रै बनाएन गुमिसकेको आत्मविश्वास पनि फर्कायो । दाम मात्रै दिएन नाम पनि दियो र एउटा पहिचान पनि दियो ।
कालीगण्डकीले घरखेत बगाएपछि……
करिव ३३ वर्ष अगाडि कालीगण्डकीले घरखेत बगाएपछि परिवारमा ठूलो संकट आइलाग्यो । बाल्यकाल सुखसँग विते पनि त्यसपछि भने सङ्घर्षपूर्ण रह्यो ।
माछा मार्ने, गिट्टी कुट्ने, दाउरा काटेर बेच्ने जस्तो काम गरेर जीविका चलाउन थाल्यौ । हामी मानिसहरुको समाजबाट छुट्टियाँ । करिव पाँच वर्ष हामी चराचुरुङ्गी तथा जंगली जनावरहरुको समाजमा बस्यौँ । बुवाले बचेको आधा जग्गा बेच्नुभयो र हामी गाउँनजिक बस्न पुग्यौँ । हामी जरुर गरिब थियाँै तर समाज झनै गरिब थियो । ती नै गरिब सोच भएकाहरुबाट फेरि हामी प्रताडित भयौँ ।
भागेर होटलमा भाँडा माझ्न जाँदा
आर्थिक अवस्था कमजोर भएपछि मैले पढ्ने रहरलाई बिट मारेर पर्वत सदरमुकाम आएँ काम गर्न । पाँच सय रुपैँयाको लागि एउटा जेरी पसलमा भाडा माझ्न थालेँ । ती दिनहरु सम्झन्छु ती सपना र रहरहरु सम्झेर आज पनि नोस्टाल्जिक हुन्छु ।
२३ दिनमा बुवा मलाई खोज्दै आइपुग्नुभयो । उहाँले मलाई सँगै लान जोड गरेँ । हिड्ने बेलामा ती पसले साहुजीले ३ सय ५० रुपैँया दिए । उनले १ सय ५० बक्सिस र केहि थान प्लेट र चम्चाहरु पनि दिए ।
पढ्न रहरमा फेरि पूर्णविराम !
म अवसरको खोजीमा थिएँ । यो कुराले पनि मलाई जीवनमा अगाडि बढ्नको लागि निकै हौस्यायो । मैले फेरी पढ्न शुरु गरेँ ।
स्कुल पुग्न करिव दुई घन्टा हिड्नुपथ्र्यो । विहान दुई घन्टा पढेर घाँस काटेर स्कुल जान्थे । साँझ गाइवस्तुलाई पानी खुवाउने, भकारो फाल्ने काम सकेर रातीसम्म पढ्थे । मेहनतले म दश कक्षामा तेस्रो भएँ ।
एस.एल.सी पछि म इन्डिया गएँ । दाइहरु उतै हुनुन्थ्यो । एस.एल.सी पास गरेँ । तर ११ कक्षा पढ्ने मेरो रहरमा भने फेरि एकपटक पूर्णविराम लाग्यो । जेठो दाइ हङकङ जाने हुनभएपछि दाइको लागि नै खर्च जुटाउनुपर्ने भयो ।
आइए पढ्ने खुब रहर थियो । दाइले अर्को वर्ष भर्ना गर्लास् भनेर फकाएका थिएँ । त्यो एक वर्ष म खेतीपातीमा नै व्यस्त भएँ । त्यसपछि भने म काठमाडौं आएँ ।
लाहुरेको निवेदन लेखेर पेट भरेँ
त्यसबेला काठमाडौंमा तीन दिनसम्म भोकै वस्नुपरेको तितो अनुभव छ मसँग । कानुन कितावखानाले मेरो भोको पेटलाई केहि राहत दियो । किनभने मैले त्यहाँ म्याग्दी, पर्वततिरबाट हङ्कङ जाने मगर समुदायहरुको निवेदन लेखिदिन्थे । एउटा निवेदन लेखेको २० रुपैँया पाउथे । कसै–कसैले मायाले बढी नै दिन्थे । एकदिनमा सय÷दुई सयसम्म निवेदन लेख्न सक्थेँ ।
गाउँको नेतृत्व गरेको त्यो आठ वर्ष
२०५६/ ०५७ सालतिर म गाउँको मायाले फर्के । सामाजिक क्षेत्रमा काम गरेँ । प्रतिनिधिविहिन भएको समयमा गाउँको नेतृत्व गरेँ । ८ वर्ष फुलवारी युवा क्लवको अध्यक्ष भएँ । गाउँको विकासको लागि निकै महत्वपूर्ण काम गरेँ ।
गाउँमा लघुउद्यम विकास कार्यक्रम आयो । त्यसपछि मैले सुन्तलाको जुस बनाउन थालेँ । उद्यमशीलताको क्षेत्रमा धेरै कुराहरु सिक्ने मौका पाएँ ।
अवसरले जापानसम्म पुर्यायो
सन् २००८ मा लघु उद्यम विकास कार्यक्रमले नै मलाई जाइकाको कार्यक्रममा सहभागी हुने अवसर दियो । २५ दिन जापानमा क्वालिटी, ग्रेडिङ् र मार्केटिङ सम्बन्धी तालिम लिन पाएँ । त्यहाँको तरकारी बजार, व्यस्थापन संस्कार, संस्कृतिआदिले मलाई साह्रै लोभ्यायो ।
फर्केपछि मैले जिल्ला लघु उद्यमी संघमा मार्केटिङको जिम्मेवारी सम्हाले । त्यसपछि मैले अल्लोको कपडा बुन्न तालिम लिने मौका पाएँ । बन्द भएको सौगात गृह मैले पुनः सञ्चालन गरेँ । जहाँ लघु उद्यमीहरुको उत्पादन बेचिन्थ्यो ।
व्यापारमा घाटा बेहोरेको त्यो समय
स्थानियहरुले सामान नकिनेपछि व्यापारमा घाटा लाग्यो । तर पनि पोखरामा क्षेत्रिय सौगात गृह खोल्ने भएपछि म पोखरा पुगेँ । पोखरा जसले मलाई जीवनको धेरै सुख–दुःखमा आँट दियो । पोखरा गएपछि व्यवसायमा सुधार आएन । पसल महेन्द्रपुलमा थियो । त्यसपछि लघु उद्यम विकास कार्यक्रमको सहयागले सिर्जना चोक सर्यौ । फर्निचरहरु जोड्यौँ तर दुखद कुरा उद्यमीको उत्पादनले जम्मा एउटा ¥याक पनि भर्न सकिएन । ढाका ल्याएर खाली ¥याकहरु छोप्नुपर्ने बाध्यता भयो ।
ऋण बढेपछि अवसरको खोजी
पसलमा अल्लो किनेर राख्यौँ । त्यतिबेला स्थानिय उत्पादनहरुको बजार थिएन । मासिक घरभाडा १२ हजार हुँदा व्यापार भने बढीमा १९ सय हुन्थ्यो । मान्छेहरुले स्थानिय उत्पादनको बारेमा बुझेकै थिएनन् । त्यतिबेला करिब १७/१८ लाख ऋण लाग्यो । मानिसहरु धेरै ऋण लागेपछि अवसरको खोजी गर्दा रैछन् सायद, धेरैले पर्यटन क्षेत्रमा जान सुझाए ।
लेकसाइडमा निकै मुस्किलले ठाउँ पायौँ । हामीलाई ऋणको लागि धेरै बैंक, फाइनान्स, सहकारी कसैले पत्याएनन् । व्यक्तिलाई धितो बुझाएपछि ऋण पायौँ । करिब चार लाख डिपोजिट राखेर हामी बस्यौँ । ५०/ ६० हजार दलालले खायो । ४/५ महिना लेकसाइडमा अफ सिजनले लेकसाइडको व्यापारमा पनि सुधार आएन । समस्याहरु बढेपछि उद्यमीको सामानहरु मात्रै नभई बाहिरको सामान पनि बेच्न थाल्यौँ ।
व्यवसायमा सफलताले दिएको खुशी
सिजन शुरु भयो । हामीले लुकाएर अर्थात कुनामा कोचेर राखेका सामन पर्यटकहरुले निकाल्दै लगेँ ।
हामी जिरो लेभलबाट शुरु गरेको लेकसाइडको व्यवसायले हामीलाई राम्रो उपलब्धि दियो । बिना धितो ऋण दिनेहरु पनि हात फुकाएर आए । हामीलाई सामान जुटाउन मुस्किल भयो । त्यतिबेला उद्यमीहरुसँग सम्पर्क थिएन । हामीले काठमाडौँ आएर सामान किनेर लगेर बेच्नुपथ्र्यो ।
भुकम्प अगाडि वर्षमा कराड बरावरको व्यापार हुन्थ्यो । सन्तुष्ट छु । भुकम्पको समयमा हामीले सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, पर्वत, गोरखा लगायतका जिल्लामा अन्य संस्थाको ६ लाख सहयोगसहित करिब १८ लाख राहत बाडेका थियौँ । जुन काम हामीले प्रचारभन्दा पनि सेवाभावले गरेका थियौँ ।
अल्लोले मलाई दाम मात्र दिएन नाम पनि दियो । पहिचान पनि दियो । अहिले करिव २०÷२५ जनालाई रोजगारी दिन सक्षम भएको छु । काठमाडौँमा राष्ट्रिय स्तरको सौगात गृह सञ्चालनमा छ । जहाँ ८ वटा जिल्ला लघु उद्यमी संघ र अन्य उद्यमीहरुको पनि संलग्नता रहेको छ । ब्याग आइटम, पर्स, सल, ज्याकेट, कोट गरी ३ सय बढीको आइटमहरु उत्पादन गर्दै आइरहेको छु । जुन, अल्लो, कटन आदिबाट बनेका छन् । यहाँ उत्पादित वस्तुहरु अष्ट्रेलिया, नदेरल्यान्ड, युएसए, क्यानडा जस्ता देशसम्म पुग्छ । जागिर पाइन भनेर गुनासो गर्नेहरुसँग मेरो खेद छ । सिप सिक्न खोज्दैनन् बरु विदेशिन्छन् ।
पर्यटकको प्राथमिकतामा अल्लो
नेपालमा अल्लोको उत्पादन असाध्यैँ न्यून छ । संखुवासभा, प्युठान, म्याग्दी, बाग्लुङ, पर्वत, लगायतका करिव ३८ जिल्लामा अल्लो उत्पादन हुन्छ । अल्लोबाट कपडा, झोला, जुत्ता आदि बनाउन सकिन्छ भने बाक्लो हुने भएकोले पाइन्टचाहिँ बन्दैन । नेचुरल भएकोले गर्दा यो पर्यटकहरुले धेरै रुचाउँछन् । नेपालीहरु जुट भन्छन् मन पराउदैनन् ।
अल्लोलाई राम्रोसँग प्रशोधन गर्न नयाँ टेक्नोलोजी आवश्यक छ । अल्लोको बजार विस्तार गर्नको लागि सरकारी निकायहरुमा अल्लोको उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यस्तै भारतबाट आउने कटनसँग प्रतिस्पर्धा गरेर टेक्नोलोजी ल्याएर धागोहरु उत्पादन गर्नुपर्छ । अन्य देशबाट धागो आयात नगर्ने हो भने अल्लोले नेपालमा नै ठूलो बजार पाउँछ । सरकारले टेक्नोलोजी ल्याउनको लागि लगानी भने गर्नुपर्छ । अल्लाको कपडा पर्याप्त नुहुँदा लेदर, कटनहरुको प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
जति काट्यो उति फैलन्छ अल्लो
अल्लो खेती गर्नै पर्दैन । अहिले करिब ५/ ७ हजार अल्लो उद्यमीहरु छन् । अल्लो त्यत्तिकै नाश भइरहेको छ । काटेर हार्भेष्ट ग¥यो भने यो निकै फैलिन्छ । त्यतिकै खेर जान्छ । फुलेर गेडा झरेको अल्लो राम्रो र बलियो हुन्छ भने खरानीमा पकाउँदा त्यो नेचुरल हुन्छ । यस्तो नेचुरल अल्लोको चप्पल पेसर हाई हुनेलाई नर्मल बनाउँछ । अल्लो प्रयोगको धेरै फाइदाहरु छन् । जुन नागरिकहरुले बुझेका छैनन् ।
अल्लो व्यवसायीहरुको राष्ट्रिय स्तरमा सञ्जाल भयो भने उद्यमी व्यवसायीहरुको विकासमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ । सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुसँग अल्लोको विकास र विस्तारका लागि के गर्न सकिन्छ ? भनेर छलफल गरिरहेको छु । कतिपय उद्यमीहरुको उत्पादनहरु गाउँमै सडिरहेको अवस्था छ । उद्यमीहरुले बजारको लागि जिल्ला–जिल्लामा कोशेली घर, सौगात जस्ता समूहहरु छन् त्यहाँ सम्पर्क गर्न सकिन्छ ।
विकृतीले बजारमा असर पुग्छ
अल्लोमा जुट मिसाएर बेच्ने व्यवसायीहरु पनि जसले बजारमा विकृति सिर्जना गरेको छ । लेनिन पनि मिसाउने गरिएको छ । कटन र अल्लो मिलाएर शतप्रतिशत अल्लो हो भनेर पनि बेचिन्छ । यसको रोकथामको लागि उद्यमी व्यवसायी र सम्बन्धित निकाय लागिपर्नुपर्छ ।
यस क्षेत्रको विकासका लागि सानो लगानीबाट शुरु गर्नुपर्छ । महत्वाकांक्षी योजना बनाउदा असफल हुने सम्भावना रहन्छ । पैसाको पछि कुद्ने हैन कि पैसाभन्दा अगाडि कुद्नको लागि पहिले उद्यमी बनौँ र सानो लगानीबाट व्यवसायमा लागौँ । ठूलो लगानी गर्दा साना–साना कुरामा अल्झिन सक्छौँ ।